गृहपृष्ठ » अनौठो संसार » विश्व चकित : यो सही समाचार हो, २८ बर्षीय पुरुषले छोरी जन्माए ! -कसरी सम्भव भयो ?
काठमाडौं । आमा बन्नु सबै महिलाहरुका लागि अहोभाग्यको कुरा हो । तर अब पुरुषले पनि बच्चा जन्माउन थालेका छन् ।
समय समयमा सामाजिक सञ्जालमा धेरै समाचार भाइरल हुन्छन्, जसलाई पत्याउनै गाह्रो हुन्छ ।
पछिल्लो समय एउटा समाचार निकै चर्चामा आइरहेको छ । वास्तवमा समाचार नै यस्तो छ, जसलाई कसैले पत्याउँदैनन् ।
कुरा के हो भने एक पुरुषले छोरी जन्माएका हुन् । हो, तपाईंले पूर्ण रूपमा सही पढ्दै हुनुहुन्छ । अमेरिकाका २८ वर्षीय पुरुषले छोरीलाई जन्म दिएका छन् ।
सन् २०२० मा आफ्नी छोरी जन्माएका पुरुषको खुलासा भएको हो । ति व्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै सक्रिय छन् । डेली स्टारका अनुसार अमेरिकाको पश्चिम भर्जिनियाका २८ वर्षीय ऐश प्याट्रिक स्काडे बाल्यकालदेखि नै महिला थिए, तर उनी पुरुष बन्न चाहन्थे ।
यसका लागि उनले सन् २०२० भन्दा पहिले टेस्टोस्टेरोन र एस्ट्रोजेन ब्लकर लिइरहेकी थिइन् ताकि उनको रूप परिवर्तन होस् र उनी पुरुषबाट महिला बन्न सकून् ।
एक दिन उनले आफू गर्भवती भएको थाहा पाएका थिँए । २८ वर्षीय ऐश प्याट्रिक स्काडे पीएचडीका विद्यार्थी र मानसिक स्वास्थ्यकर्मी पनि हुन् । एक दिन डेटिङ एपको सहयोगमा उनले एक अपरिचित व्यक्तिलाई भेटेका थिए । त्यसपछि दुवैबीच शारीरिक सम्बन्ध भयो ।
पछि ऐश गर्भवती भएको खुलासा भयो । सोही वर्ष उनले छोरीलाई जन्म दिएका हुन् । ऐशले छोरीको नाम रोनन राखेका छन् । ऐशले आफू गर्भवती भएको थाहा पाएदेखि नै बच्चा स्वस्थ होस् भनेर औषधि बन्द गरेको बताइएको छ ।